Mitemo nemirau yekushandisa webhusaiti - Modelarski Świat
Mirau yechitoro chepamhepo Modelarski Świat (Modellers World)
Kujekesa, pakati pezvimwe, mitemo yekupedzisa zvibvumirano zvekutengesa kuburikidza nechitoro, iine ruzivo rwakanyanya kukosha pamusoro peMutengesi, chitoro uye kodzero dzeMutengi.
§ 1 Tsanangudzo
§ 2 Bata neMutengesi
§ 3 Unyanzvi zvinodiwa
§ 4 Kutenga muChitoro
§ 5 Kubhadhara
§ 6 Kuitwa kwechibvumirano
§ 7 Kodzero yekubvisa muchibvumirano
§ 8 Kunze kwekune kodzero yekutora chibvumirano
§ 9 Zvichemo
§ 10 Zvako zvemunhu
§ 11 Kugadziriswa
§ 12 Zvipo zveVatengi vasiri Vashandisi
* 13 Mitemo yekusimudzira "yemahara"
Mashoko Okuwedzera 1: Muenzaniso wekudzora fomu
Kushanda mazuva - mazuva kubva Muvhuro kusvika Chishanu, kunze kwemazororo eruzhinji.
Nhoroondo - iyo yemahara Chitoro mashandiro (sevhisi inopihwa zvemagetsi) inodzorwa nemitemo yakaparadzaniswa, nekuda kwekuti Mutengi anogona kumisikidza yake Akaunti muStore.
Mutengi - Mutengi mukati mezvinorehwa nezvakapihwa neCustom Code.
Mutengi - Mutengi wese muChitoro.
mirau - iyi mirau.
chitoro - Sklep Modelarski Świat online chitoro chinotungamirirwa neMutengesi pakero https://modelarskiswiat.pl (kana https://modelarskiświat.pl)
Mutengesi - MICHAŁ WIŚNIEWSKI, muzvinabhizimusi ari kuita bhizimusi pasi pezita reMODELARSKI ŚWIAT MICHAŁ WIŚNIEWSKI, akapinda muCentral Rejista uye Ruzivo nezveEconomic Activity yakachengetwa negurukota rine hunyanzvi hwehupfumi nekuchengeta iyo Central Rejista uye Ruzivo nezveEconomic Activity, NIP 5581772929, REGON nhamba 369946493, ul. Dorodna 5, 85-790 Bydgoszcz.
2 TAURA NEMUTENGESI
Kero yeposvo: ul. DORODNA 5, 85-790 Bydgoszcz
E-mail kero: kontakt@modelarskiswiat.pl
3 ZVINODIWA ZVEMAOKO
Zvekushanda chaiko kweiyo Chitoro, unoda:
Chigadzirwa chine Internet kuwana
Kuisa odha muChitoro, pamusoro pezvinodiwa zvakatemwa mundima 1, inoshanda e-mail account inodiwa.
4 KUTENGA MUCHITORO
Mitengo yezvinhu inoonekwa muChitoro ndiwo mitengo yese yezvinhu, kusanganisira VAT.
Mutengesi anonongedza kuti mutengo wese weodha unosanganisira mutengo wezvinhu zvinoratidzwa muChitoro uye, kana zvichibvira, mutengo wekuendeswa kwezvinhu.
Midziyo yakasarudzwa kutengwa inofanirwa kuwedzerwa mudengu muChitoro.
Ipapo Mutengi anosarudza kubva pane zviripo muChitoro: nzira yekuendesa zvinhu uye nzira yekubhadhara yeodha, uye zvakare inopa iyo data inodiwa kuti upedze odha.
Iwo odha inoiswa pamusoro pekusimbiswa kwezviri mukati mayo uye kugamuchirwa kweMitemo neMutengi.
Kuisa odhi kwakafanana nekupedzisa chibvumirano chekutengesa pakati peMutengi neMutengesi.
Mutengesi achapa Mutengi simbiso yekupedzisa kwechibvumirano chekutengesa pane yakasimba dura pane ichangoburwa pakuendesa.
Mutengi anogona kunyoresa muChitoro, i.e. gadzira Akaunti mairi kana kutenga pasina kunyoreswa nekupa dhata rake neimwe odha inogona.
Unogona kubhadhara odha yakaiswa, zvinoenderana nesarudzo yeMutengi:
Neyakajairwa kuendesa kune iyo Mutengesi iyo bhangi account.
Via iyo yekubhadhara chikuva:
Mari pakuburitsa, kureva kumutumwa wekambani inotumira inozoendesa mari kuaccount yeMutengesi.
Kana Mutengi akasarudza mubhadharo pamberi, odha yacho inofanira kubhadharwa mukati memazuva matatu ebhizinesi ekuisa odha
Mutengesi anozivisa kuti mune dzimwe nzira dzekubhadhara, nekuda kwehukuru hwavo, kubhadhara kweodha nenzira iyi zvinogoneka chete nekukurumidza mushure mekuisa odha.
Nekutenga muzvitoro, Mutengi anobvuma kushandiswa kwema invoice emagetsi neMutengesi. Mutengi ane kodzero yekutora kubvuma kwake.
6 KUTAURA KUZADZISA
Mutengesi anosungirwa kuendesa zvinhu zvisina hurema.
Zuva rekuzadzikisa odha rinoratidzwa muChitoro.
Muchiitiko chekuti Mutengi akasarudza kubhadhara pamberi peodha, Mutengesi anoenderera neodha mushure mekuibhadharira.
Mumamiriro ezvinhu apo, pasi pechinhu chimwe chete, Mutengi atenga zvinhu nemazuva akasiyana ekuendesa, odha yacho ichagadziriswa mukati menguva yemuganho inoshanda kune izvo zvinhu zvine zuva rakarebesa rekuendesa.
Midziyo yakatengwa muChitoro inoendeswa zvichienderana nenzira yekuendesa yakasarudzwa neMutengi:
Via kambani yekutakura
ZveInPost pasuru michina
* "Kutakura kwemahara" kusimudzira kwemaodha anopfuura zana:
euro, gbp: yenyika dzeEuropean Union, kunze kwePoland.
PLN chete yePoland. (nekuda kwekukanganisa kwehunyanzvi, zvinokwanisika kuodha muPLN mune yega nyika yeEU, zvisinei, mune ino kesi, isu tinokumbira mubhadharo wekutakura, kana iyo yakaenzana yeodha yacho isingaite EUR 100 kana gbp zvinoenderana mwero wekuchinjana wazvino.)
7 KODZERO YOKUDZOKA KUSVIRA
Mutengi ane kodzero yekubvisa muchibvumirano chakaitwa neMutengesi kuburikidza neChitoro, zvichiteerana ne § 8 yeMitemo, mukati memazuva gumi nemana pasina kupa chikonzero.
Nguva yekupedzisira yekubvisa muchibvumirano inopera mushure memazuva gumi nemana kubva pazuva racho:
Pane iyo Mutengi akawana zvinhu kana pairi wechitatu asiri iye anotakura uye akaratidzirwa neMutengi akapinda mukuva nezvinhu.
Pane iyo Mutengi anowana kuve neicho chekupedzisira chinhu kana icho chechitatu, kunze kwekutakura uye chakaratidzwa neMutengi, anowana kuve neicho chekupedzisira chinhu mune chibvumirano chinoda kuchinjirwa kwemuridzi wezvinhu zvakawanda izvo dzinoendeswa zvakasiyana.
Kuti Mutengi ashandise kodzero yekubuda muchibvumirano, anofanirwa kuzivisa Mutengesi, achishandisa data rakapihwa mu § 2 yeMitemo, nezve sarudzo yake yekubuda muchibvumirano achishandisa chirevo chisina chokwadi (semuenzaniso tsamba yakatumirwa neposvo kana ruzivo rwakatumirwa neemail).
Mutengi anogona kushandisa iyo modhi yekubvisa fomu pakupera kweMitemo, asi hazvimanikidzi.
Kuti uwane nguva yakatarwa yekubuda muchibvumirano, zvinokwana kuti Mutengi atumire ruzivo maererano nekushandiswa kwekodzero yake yekubvisa muchibvumirano pasati nguva yakatarwa yekubuda muchibvumirano.
ZVINOGONESESA KUBVA KUSUNGANA
Kana paitika kubviswa pachibvumirano, Mutengesi anodzosera kuMutengi mari dzese dzaakatambira kubva kwaari, kusanganisira mari yekuendesa zvinhu (kunze kwemimwe mari inowedzerwa nenzira yekutakura yakasarudzwa neMutengi kunze kwenzira yepasi yekutengesa yakachipa inopihwa neMutengesi), nekukasira kupfuura mazuva gumi nemana kubva pazuva rakaziviswa Mutengesi nezve sarudzo yeMutengi yekushandisa kodzero yekubuda muchibvumirano.
Mari yekudzorera ichaitwa neMutengesi achishandisa nzira dzakafanana dzekubhadhara dzaishandiswa neMutengi mukutenga kwekutanga, kunze kwekunge Mutengi abvumirana neimwe mhinduro, mune imwe neimwe Mutengi haazobhadhare mari inoenderana nekudzoka uku.
Mutengesi anogona kurega kudzosera mari kusvikira agamuchira zvinhu kana kusvika humbowo hwekudzoka kwake hwapihwa kwaari, zvinoenderana nekuti chiitiko chei chinotanga kuitika.
Mutengesi anokukumbira kuti udzorere zvinhu kukero inotevera: ul. Janosika 2/88, 85-794 Bydgoszcz nekukasira, uye chero zvodii pasati papera mazuva gumi nemana kubva pazuva rakaburitswa Mutengi nezveMutengesi nezve kubviswa muchibvumirano chekutengesa. Nguva yakatarwa inosangana kana Mutengi akadzorera zvinhu zvisati zvapera zvemazuva gumi nemana.
Mutengi anotakura mutengo wakanangana wekudzorera zvinhu.
Mutengi anongova nemhosva yekudzikiswa kwemutengo wezvinhu zvichikonzerwa nekuishandisa neimwe nzira pane zvaidikanwa kumisikidza hunhu, hunhu uye mashandiro ezvinhu.
Kana izvo zvinhu, nekuda kwehunhu hwazvo, zvisingakwanise kudzoserwa netsamba yakajairwa, Mutengi achafanirwa kutakura mari dzakananga dzekudzorera zvinhu. Mutengi achaziviswa nezvemari inofungidzirwa yemitengo iyi neMutengesi murondedzero yezvinhu zviri muchitoro kana kana uchiisa odha.
8 KUSARUDZWA KURUDZIDZO YOKUDZIDZA KUSVIRA
Kodzero yekubvisa pachibvumirano chemufambo haina kodzero kuMutengi maererano nechibvumirano:
Mune iyo nyaya yebasa iri chinhu chisina-kufanogadzirwa, chakagadzirwa zvinoenderana nemutengo weMutengi kana kushandira kugutsa zvido zvake.
Mune iyo nyaya yebasa iri chinhu chinodzikira nekukasira kana chine pfupi pasherefu-hupenyu.
Mune iyo nyaya yebasa chinhu chinounzwa mupakeji yakavharika, iyo mushure mekuvhura pasuru yacho haigone kudzoserwa nekuda kwekuchengetedzwa kwehutano kana zvikonzero zvehutsanana, kana pasuru yakavhurwa mushure mekusununguka.
Mune izvo nyaya yebasa iri zvinhu izvo mushure mekusununguka, nekuda kwehunhu hwazvo, zvakabatana zvisingaenzaniswi nezvimwe zvinhu.
Mune iyo nyaya yebasa iri inonzwika kana yekurekodha kurekodha kana komputa software yakaunzwa mune yakavharika package, kana iyo pasuru yakavhurwa mushure mekusununguka.
Nekuendeswa kwemapepanhau, mapepanhau kana magazini, kunze kwezvibvumirano zvekunyorera.
Mairi mutengo kana mubhadharo zvinoenderana nekuchinja-chinja mumusika wezvemari uyo muzvinabhizimusi asina simba raanogona kuita uye pasati pasvika nguva yekutora chibvumirano.
Zvekutumirwa zvemadhijitari izvo zvisina kuchengetwa pane inooneka svikiro, kana iko kuita kwacho kwakatanga nemvumo yeMutengi yakatarwa nguva yakatarwa isati yasvika yekubuda muchibvumirano uye mushure mekuzivisa muzvinabhizimusi nezve kurasika kwekodzero yekubuda muchibvumirano.
Kana paine chakaremara muzvinhu, Mutengi ane mukana wekunyunyuta pamusoro pezvinhu zvakaremara pahwaro hwewarandi kana garandi yakapihwa muCode Code, chero kupihwa kupihwa vimbiso.
Achishandisa garandi, Mutengi anogona, pamatemu uye mukati memiganhu yenguva yakatarwa muCivil Code:
Tumira chirevo chekudzikisa mutengo
Panyaya yekukanganisa kwakakura - isa chirevo chekubvisa muchibvumirano
Raira kuti chinhu chinotsiviwa nechisina kuremara
Raira kuti hurema hubviswe
Mutengesi anokukumbira kuti uendese chichemo pasi pevimbiso kupositi kana kero yemagetsi inoratidzwa mu § 2 yeMitemo.
Kana zvikazoitika kuti kuti tione kunyunyuta kunofanirwa kuendesa zvinhu zvakashambadzirwa kuMutengesi, Mutengi anosungirwa kuendesa zvinhu, mune Mutengi pamutengo weMutengesi, kukero Janosika 2/88, 85-794 Bydgoszcz.
Kana imwe vimbiso yakapihwa yechigadzirwa, ruzivo nezvacho, pamwe nemamiriro azvo, inowanikwa mune tsananguro yechigadzirwa muChitoro.
Zvichemo zvine chekuita nekushanda kweChitoro zvinofanirwa kutumirwa kukero yeemail inoratidzwa mu § 2 yeMitemo.
Kufungisisa kwekunyunyuta neMutengesi kuchaitika mukati memazuva gumi nemana.
NZIRA DZINODZIDZISWA DZENYAYA DZOKUGARA ZVINONYANYA uye KUSVIRA MHOSVA
Muchiitiko chekuti maitiro ekunyunyuta haaunze mhedzisiro inotarisirwa neMutengi, Mutengi anogona kushandisa, pakati pezvimwe, na:
Mediation inoitiswa neanokwanisa Provincial Inspectorate Yekutengeserana Kuongorora, kwaunofanirwa kunyorera kuyananisa. Semutemo, maitiro acho mahara. Chinyorwa cheInspectorates chiripo pano: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Rubatsiro rwemunda unokwanisa wedare rinogadzikana revatengi rinoshanda kuProvince Inspectorate of Trade Inspection, uko kunofanirwa kutumirwa chikumbiro chekutarisirwa kwenyaya pamberi pedare redzimhosva. Semutemo, maitiro acho mahara. Rondedzero yematare inowanikwa pa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Rubatsiro rwemahara rwemasiparati kana poviat Mutengi Ombudsman.
Internet ODR chikuva chinowanikwa pa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Mutungamiri wedata rako rakapihwa neMutengi kana uchishandisa Chitoro ndiye Mutengesi.
Dhata reiye Mutengi rinogadziriswa pachishandiswa chibvumirano uye nekuitiswa kwayo, zvinoenderana nemisimboti yakatarwa mumutemo wakazara weParamende yeEuropean uye yeKanzuru (EU) pamusoro pekuchengetedzwa kwedata (GDPR). Ruzivo rwakadzama nezvekugadziriswa kwedatha neMutengesi inosanganisirwa mune yega zvakavanzika zvakatumirwa muStore.
Mutengi anorambidzwa kupa zvisiri pamutemo.
Ora yega yega yakaiswa muChitoro inoumba chibvumirano chakatsaurwa chekutengesa uye inoda kugamuchirwa kwakasiyana kwemirau. Chibvumirano chinopedzwa nenguva uye nechinangwa chekuzadzikiswa.
Zvibvumirano zvakagumisirwa pahwaro hwemirau iyi zvinopedzwa muchiPolish.
Hapana kana chinhu mumitemo iyi chinobvisa kana munzira ipi neipi chinogumira kodzero dzevatengi pasi pemutemo.
12 ZVIPO zvine chekuita nevatengi VASINA VATengi
Kodzero yekubvisa kubva pachibvumirano chemadaro haiwanikwe kune chimwe chinhu chisiri Mutengi.
Chero chisungo cheMutengesi kune Mutengi asiri Mutengi chinogumira pahuwandu hweodha yakaiswa neMutengi.
Mutoro weMutengesi pasi pevimbiso kuMutengi uyo asiri Kunsument inogumira kune gore rimwe chete kubva pakuendeswa kwezvinhu kune Mutengi.
Kana paine mukana wekupokana neMutengi asiri Mutengi, dare rinokwanisa rinenge riri iro dare rinokwanisa chigaro cheMutengesi.
* 13 Mitemo neMamiriro eiyo Mahara Ekutakura Ekusimudzira.
* Iko kusimudzira kwe "Mahara kutumira" kunowanikwa kune maodha anodarika zana:
EUR, GBP: yenyika dzese dzeEuropean Union.
Annex 1 kune Mitemo
Pazasi peiyo modhi yekubvisa fomu iyo Mutengi anogona kana yaasingashandise:
TEMPLATE FOMU YOKUDZOKA KUSVIRA KUSVIRA
(fomu iri rinofanirwa kuzadzikiswa uye rodzoserwa chete kana uchida kubvisa chibvumirano)
KUENZANISA NYIKA MICHAŁ WIŚNIEWSKI
ul. Janosika 2/88, 85-794 Bydgoszcz, e-mail kero: sklep@modelarskiswiat.pl
- Ini ……………………………………………………………………. Ini ndiri kuzivisa nezve kubviswa kwangu kubva muchibvumirano chekutengesa chezvinhu zvinotevera:
- Zuva rekutambira ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………
- Zita nesurname yeMutengi (s) ……………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………
- Kero dzevatengi …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ..
(chete kana fomu racho rakatumirwa mupepa vhezheni)
Zuva …………………………………… ..
(*) Bvisa sezvakakodzera.
Mitemo yeakaunzi mu Sklep Modelarski Świat chitoro
§ 4 Nhoroondo
§ 5 Zvichemo
§ 6 Zvako zvemunhu
§ 7 Kugadziriswa
Nhoroondo - remahara Chitoro basa (sevhisi) inodzorwa mumirau iyi, nekuda kwekuti Mutengi anogona kumisikidza yake yega Akaundi muChitoro.
Mutengesi - muzvinabhizimusi anomhanyisa bhizinesi pasi pezita MODELARSKI ŚWIAT MICHAŁ WIŚNIEWSKI, akapinda muCentral Rejista uye Ruzivo nezveEconomic Activity yakachengetwa negurukota rine hunyanzvi hwehupfumi nekuchengetedza Central Register neRuzivo nezveEconomic Activity, NIP 5581772929, REGON nhamba 369946493, ul . Dorodna 5, 85-790 Bydgoszcz.
Kero yeposvo: ul. Dorodna 5a, 85-790 Bydgoszcz
E-mail kero: sklep@modelarskiswiat.pl
Zvekushanda chaiko uye kugadzirwa kweAccount, iwe unoda:
Akaundi inoshanda yeemail
Kugadzira Akaunti ndeyekuzvidira uye zvinoenderana nekuda kweMutengi.
Iyo account inopa Mutengi zvimwe zvekusarudza, senge: kutarisa nhoroondo yemirairo yakaiswa neMutengi muChitoro, kutarisa mamiriro eodha kana kugadzirisa data reMutengi.
Kuti ugadzire Akaundi, zadza fomu rakakodzera muChitoro.
Panguva yekugadzira Akaunti, chibvumirano chinoitiswa kwenguva isingagumi pakati peMutengi neMutengesi maererano nekuchengetwa kweAccount pane zvakatemwa muMitemo.
Mutengi anogona kukanzura Akaundi chero nguva pasina kuita chero mutengo.
Kuti ubvise Akaundi, ndokumbira utumire basa rako kuMutengesi kune inotevera kero ye-e-mail: sklep@modelarskiswiat.pl, zvinozoguma nekudzimwa kweAccount nekumiswa kwechibvumirano chekuchengeta account.
Zvichemo zvine chekuita nekushanda kweAccount zvinofanirwa kutumirwa kukero ye-e-mail sklep@modelarskiswiat.pl.
Muchiitiko chekuti maitiro ekunyunyuta haaunze mhedzisiro inotarisirwa neMutengi, Mutengi anogona kushandisa, pakati pevamwe na:
Chibvumirano cheAccount chekuchengetedza chinopedzwa muchiPolish.
Kana paine zvikonzero zvakakosha, zvataurwa mundima. 4, Mutengesi ane mvumo yekugadzirisa iyi Mitemo yeAccount.
Zvikonzero zvakakosha, zvataurwa mundima. 3 ndeaya:
kudiwa kwekuchinjisa Chitoro kune zvinopihwa zviri pamutemo zvinoshandiswa nechitoro
kugadzirisa kuchengetedzwa kwebasa rakapihwa
kushandura mashandiro eAccount iyo inoda kuchinjiswa kweAccount mirau.
Mutengi achaziviswa nezve shanduko yakarongwa kumitemo yeAccount kanenge mazuva manomwe shanduko isati yaitwa kuburikidza neemail inotumirwa kukero yakapihwa iyo Akaundi.
Kana Mutengi asingagamuchire shanduko yakarongwa, anofanira kuzivisa Mutengesi nezvazvo nekutumira meseji yakakodzera kune e-mail kero yeMutengesi sklep@modelarskiswiat.pl, zvinozoguma nekumiswa kwechibvumirano chekuchengetedzwa kweAccount pakapinda simba reshanduko yakarongwa kana yapfuura.kana Mutengi akaita chikumbiro chakadai.
Kana Mutengi asingapikisane neshanduko yakarongwa kudzamara yatanga kushanda, zvinofungidzirwa kuti anozvigamuchira, izvo zvisingaite chero chipingamupinyi pakumisa chibvumirano mune ramangwana.
Newsletter - sevhisi yakapihwa zvemagetsi mahara, nekuda kwekuti Anogashira Sevhisi anogona kugamuchira kubva kuMubatsiri Webasa zvemagetsi zvakarairwa mameseji maererano neChitoro, kusanganisira ruzivo nezve zvinopihwa, kukwidziridzwa uye zvigadzirwa zvitsva muChitoro.
chitoro - Sklep Modelarski Świat chitoro chepamhepo chinotungamirirwa neMupi Webasa pa https://modelarskiswiat.pl (kana https://modelarskiświat.pl)
Mubatsiri Webasa - muzvinabhizimusi anomhanyisa bhizinesi pasi pezita MODELARSKI ŚWIAT MICHAŁ WIŚNIEWSKI, akapinda muCentral Rejista uye Ruzivo nezveEconomic Activity yakachengetwa negurukota rine hunyanzvi hwehupfumi nekuchengetedza Central Register neRuzivo nezveEconomic Activity, NIP 5581772929, REGON nhamba 369946493, ul . Janosika 2/88, 85-794 Bydgoszcz.
Mugashiri - chimwe nechimwe chikamu chinoshandisa iyo Tsamba yebasa.
Iye Anogamuchira Sevhisi anogona kushandisa nekuzvidira basa reNhau.
E-mail mameseji anotumirwa sechikamu chebasa iri anozotumirwa kukero yeemail yakapihwa neMutengi panguva yekunyorera kuNhau.
Anogamuchira Sevhisi, kuitira kuti apedze chibvumirano uye kunyorera kuNewsletter sevhisi, padanho rekutanga anopa kero yake ye-e-mail kwaanoda kugamuchira mameseji anotumirwa sechikamu cheNhau. Ipapo, kukero ye-e-mail yakapihwa mudanho rekutanga, Mugoveri Webasa anotumira Anogamuchira Sevhisi meseji inosimbisa iyo kero ye-e-mail, iyo inosanganisira chinongedzo chekusimbisa kuda kweMutengi Webasa kunyorera kuNewsletter. Mushure mekunge Mutengi asimbisa kuda kwake kunyorera kuNewsletter, kondirakiti yekupihwa kwebasa inopedzwa uye iye Anopa Sevhisi anotanga kuipa Mutengi.
Anogamuchira sevhisi anogona kuzvinyoresa kubva kuNhau, pasina kupa chero chikonzero uye kupinza chero mutengo, chero nguva nekutumira meseji kukero yeMupi Webasa. sklep@modelarskiswiat.pl.
Kutumira meseji nechikumbiro chekuzvinyora kubva kuNewsletter kunogumisa kumisikidza chibvumirano chekupihwa sevhisi.
Zvichemo pamusoro peGwaro rinofanira kuziviswa kuMupi Webasa kukero inotevera yeemail: sklep@modelarskiswiat.pl.
Anopa Sevhisi achapindura kunyunyuto mukati memazuva gumi nemana kubva agamuchira kunyunyuta.
4 Yemunhu data
Mutungamiri wedata rako rakapihwa neMubatsiri Webasa paunenge uchishandisa Nhau Ndiro Rinopa Sevhisi.
Ruzivo rweMutengi rwevanhu rwunogadziriswa pachishandiswa kondirakiti uye nekuitiswa kwayo, zvinoenderana nemisimboti yakatarwa mumutemo wakazara weParamende yeEuropean uye yeKanzuru (EU) pamusoro pekuchengetedzwa kwedata (GDPR). Ruzivo rwakadzama pamusoro pekugadziriswa kwedata neMutengesi inosanganisirwa mune yega zvakavanzika zvakatumirwa muStore.
5 Ekupedzisira Zvirongwa
Mubatsiri webasa anochengetera kodzero yekugadzirisa iyi mirau nekuda kwezvikonzero zvakakosha. Chikonzero chakakosha kudiwa kwekushandura mirau inokonzerwa nekuvandudzwa kwebasa reNhau kana shanduko mumutemo, zvichikanganisa kupihwa kwebasa neMupi Webasa.
Ruzivo nezve shanduko yakarongwa kumitemo ichatumirwa kukero yevatengi yeemail yakapihwa panguva yekunyorera kuNewsletter mazuva manomwe asati ashandurwa.
Kana iye Anogamuchira sevhisi asingapikisane neshanduko dzakarongwa kudzamara vapinda musimba, zvinofungidzirwa kuti anozvitambira.
Mukusavapo kwekugamuchirwa kweshanduko dzakarongwa, Anogamuchira Sevhisi anofanira kutumira ruzivo nezvazvo kukero yeE-mail yeMupi Webasa: sklep@modelarskiswiat.pl, izvo zvinoguma nekumiswa kwechibvumirano chekupihwa sevhisi pakatanga kushanda kweshanduko dzakarongwa.
Izvo zvinorambidzwa kuti Mutengi ape zvisiri pamutemo zvemukati.
Pazasi pane yakajairwa mitemo yekupindura pa modarskiświat.pl.
Tinoremekedzana uye hatitadzisane. Isu tinogadzira yakanaka mamiriro. Hatishandisi anonyadzisa uye anowanzo shandiswa mazwi seanogumbura.
Isu tinotaura pane zvakatumirwa, asi kwete nenzira yakaipa kana yekuseka. Chero kutsoropodzwa kunofanira kuva kunovaka, kwete kunamatira kana kudzikisira. Kana paine dambudziko, tinomhan'arira kumutariri.
Wese mushandisi anogona kutaura pane zvakaburitswa pawebhusaiti www.modelarskiswiat.pl. Mutungamiri webhusaiti anochengetedza kodzero yekubvisa izvo zvisingaenderane nezvinodiwa nemirau iyi.
Kana iwe uchida kutaura chimwe chinhu pane iyo Modeling World webhusaiti, yeuka izvo zvakaburitswa zvemukati zvisina hukama nemodelling zvichabviswa.
Isu hatisanganisi mune zvakataurwa kana mameseji, kushambadzira kwezvitoro zvepamhepo kana zvakamira, uye hatibatanidze mawebhusaiti. Mibvunzo yakaita se "ndeipi shopu yemhando yaunokurudzira" kana "Ini ndinokurudzira iyo saiti ...." ichadzimwawo. Wewebhu webhusaiti chete ndiye anogona kuisa kushambadza uye zvekunze zvinongedzo.
Isu tinobata vana vadiki uye vanotanga vaenzi / vatauri vane nzwisiso yakakosha, nekuti tinoda kuvakurudzira, kwete kuvaodza mwoyo. Saka isu tinosarudza mazwi mune zvakataurwa zvakanyatso pasi pemabasa enhengo diki.
Iyi mirau yakagadzirwa kudzivirira nyonganiso uye spam pawebhusaiti. Kukundikana kutevedzera izvi kunogona kukonzera kurambidzwa kana kubviswa kubva kune vakanyoreswa vashanyi. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve saiti uye nebasa rayo nekudzvanya mune iyi link.